macOS Monterey sy iPadOS 15 dia mitondra maody maivana amin'ny Mac sy iPad | Avy amin'ny mac aho
Ity dia iray hafa amin'ireo zava-baovao izay hampiharina amin'ny rafitra fiasan'ny ranomasina sy ny iPad. Amin'ity tranga ity, ny kinova iPadOS sy macOS miaraka iPadOS 15 sy macOS Monterey dia hanampy Mode Mahery Lava hanitatra ny androm-piainany.
Araka ny fantatsika rehetra fa ity safidy ity dia ahafahan'ny mpampiasa iPhone manitatra ny androm-piainany rehefa mihodina izy io ary noho izany ho azon'ny tompona iPad sy Mac koa izao. Vaovao tsara na dia eo aza ny solosaina izay manana fiainana bateria lehibe kokoa noho ny an'ny iPhone mahazatra, mamela ny an'ny iPhone Pro Max.
Mazava ho azy fa fiasa manokana ho an'ny Mac misy bateria
Izahay dia mieritreritra fa tsy ilaina ny maneho hevitra fa ity fampiasa maody ambany herinaratra vaovao amin'ny Mac ity dia ho an'ny solosaina manana bateria ihany, ka tsy hiseho amin'ny Mac Pro, Mac mini na iMac izany. Amin'ity tranga ity ny fiasa vaovao Ho hita ao amin'ny MacBook sy MacBook Pros navoaka tamin'ny 2016 na taty aoriana.
Ao amin'ny iPhone, Low Power Mode dia mametra ny fidiran'ny solosaina hanery ny mailaka, ny fanavaozana ny rindrambaiko any aoriana, ny fisintomana mandeha ho azy, ny sary mihetsika sasany, ny Sary iCloud, ary ny fifandraisana 5G hanitatra ny androm-piainan'ilay fitaovana. Azo inoana fa ny maody ambany herinaratra izay hampiharina amin'ny rafitra fiasa vaovao an'ny Mac, macOS Monterey ary amin'ny iPad miaraka amin'ny iPadOS 15 dia hiasa amin'ny fomba mitovy amin'ny iPhone ihany koa, mametra ny fiasa sasany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Mac OS X » macOS Monterey » macOS Monterey sy iPadOS 15 Mitondra maody maivana amin'ny Mac sy iPad
Sintomy eto ny rindrina macOS Monterey